How to make Google Certified Device – Xiaomi Guide
Google Play Store Settings ထဲဝင်ကြည့်ရင် Device Certification နေရာမှာ Uncertified ဖြစ်နေတာကို Certified device ဖြစ်အောင် Register လုပ်ပေးနည်းလေးပါ။
အဓိကကတော့ ထုံးစံအတိုင်း MIUI China rom တွေမှာ Google apps တွေထည့်သွင်းပြီးရင် ဖြစ်တတ်တာပါပဲ။ သွင်းသွင်းပြီးချင်း ဘာမှမပြတတ်ပါဘူး။ Play Service, Play Store တို့ အလိုလို Update မြင့်တက်သွားချိန်မှာ လာပြပါတယ်။ Global rom တင်ထားတာတွေမှာတော့ ဖြစ်လေ့မရှိပါ။ အောက်က ပုံလေးလို ဖြစ်တာမျိုးလေးပေါ့။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Play Store app ထည့်ထားတယ်။ လိုတဲ့ app မှန်သမျှဒေါင်းသုံးတယ်။ ကိုယ့် Country region ကို ကန့်သတ်မှုလုပ်ထားတဲ့ app မှတစ်ပါး ကျန်တာတွေက ဒေါင်းလို့ရတာပါပဲ။ Update ရချိန်မှာလဲ Update ပေါ်ပါတယ်။ လုပ်လိုက်လို့လဲရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Google pay service ကိုသုံးမယ်။ Online game တွေက Google Play Games service နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး google account နဲ့ဝင်ဆော့တာတွေလုပ်၊ ကိုယ်လိုချင်တာတွေဝယ်တာတွေလုပ်နိုင်ဖို့ ကိုယ့် Google Account ထဲမှာ Google gift card voucher code လိုတွေ Redeem လုပ်ထား၊ ဝယ်၊ စသည်ဖြင့် အခြားသော Android app တွေနဲ့ Google service framework apps တွေ အဆင်ပြေပြေချောမွေ့စွာ အမြဲအိုကေနေစေဖို့ သည်ဟာလေးကို လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Global rom တွေသုံးနေရသလို ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ နှိပ်ပြီးသား လိုတာလုပ်သွား.. အဆင်ပြေနေရမယ်ပေါ့။ သာမာန် Free app တွေဒေါင်းသုံးမယ်ဆိုရုံကတော့ အရေးမကြီးလှပါ။ ကျနော်ဆို လုပ်လေ့လဲ မရှိပါ 😀
Uncertified Device ဖြစ်နေရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ.. စသည်ကို Google ကပြောထားတာတော့ အောက်ပါအတိုင်း Screen Shoot လဲကလိုပါပဲ။ မိမိနားလည်သလို ဘာသာပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့ 😀 Mi A1, Mi A2 တို့တွေလို Google Stock Android rom လို သုံးတဲ့ဟာတွေအတွက်ကတော့ သူပြောသလို နဲနဲလေးပို effect ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာ..။ MIUI ဆိုတာကတော့ ဖုန်းမှာ အဓိက မောင်းနှင်မယ့် OS ကို အပေါ်က အုပ်ပြီး သူ့စိတ်ကြိုက် UI, Functions တွေ အဓိကဥိးစားပေးထည့်၊ MIUI Update လုပ်လေ့ရှိတာမို့ သိပ် effect မရှိဘူးဆိုနိုင်တာပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာ Xiaomi လဲ Google နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး အခြား Global device တွေနည်းတူ Framework တစ်ခုထဲမှာ အတူဖြစ်အောင်လိုတွေ လုပ်ဆောင်လာတော့ MIUI rom နဲ့ Google Android နဲ့ သတ်သတ်ကြီးကွဲထွက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေ သိပ်မရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဥပမာ Project Treble လိုမျိုးတွေပေါ့။ ဖုန်းတွေမှာ Android ပိုင်းဆိုင်ရာ System update တွေလိုကို အမြဲ up to date ဖြစ်နေစေအောင်လိုမျိုးတွေပေါ့ခင်ဗျာ..။
ကဲ.. အဓိကလိုရင်းဖြစ်တဲ့ Uncertified ပြနေတာကို Certified ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတာပဲ လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်…။ Certified ဖြစ်အောင် Google ရဲ့ Site link လေးတစ်ခုမှာ Register သွားလုပ်ထားဖို့ Google Service Framework ID လိုပါတယ်။ အဲဒါလေးကြည့်ဖို့ အောက်ပါ Device ID ဆိုတဲ့ app လေးကို ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပြီး ဖုန်းထဲ Install ပေးထားလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေရာ လင့်တစ်ခုခုကနေဒေါင်းပါ။
Play Store ထဲကနေလဲ တိုက်ရိုက်ရှာထည့်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ Device ID လို့ search ပြီးထည့်ရုံပါ။ အောက်ပါ SS ထဲကပုံလေးအတိုင်းပါ။
ပြီးရင် Device ID app လေးကိုဖွင့်ပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Google Service Framework ID လေးကိုတွေ့ပါမယ်။ တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ COPY လုပ်ထားလိုက်ပါ။ အဲသည် Register လုပ်ရာမှာ ထည့်ပေးရမယ့် ID ပါပဲ။
ID copy ကူးထားပြီးရင် Browser app ကိုဖွင့်ပါ။ Address bar မှာ သည် Address [ -> www.google.com/android/uncertified <- ] ကို ရိုက်ဝင်ပါ။
Browser ပွင့်လာပြီးရင် ဖုန်းထဲမှာ ကိုယ်ဝင်ထားတဲ့ Google account (gmail) နဲ့ password ကိုသုံးပြီး Login ဝင်ပေးပါ။ ဝင်ပြီးရင်တော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း မြင်ရပါမယ်။
သေချာမမြင်ရရင် ဖုန်းကို Landscape mode ကို rotate လှည့်ပြီးကြည့်ကြည့်ပေါ့။ အောက်နားလေးက Register button ဘယ်ဖက်နားက Text box လေးမှာ touch လေးဖိထားလိုက်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်း PASTE ဆိုတာပေါ်လာရင် နှိပ်ပြီး မိမိတို့ အရင်က COPY ကူးထားတဲ့ ID ကို paste လုပ်ချလိုက်ပါ။
ID Paste လုပ်ပြီးရင်တော့ Register button လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အင်တာနက်ဖွင့်ထားရပါမယ်။ Register လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါပုံလေးလို Register လုပ်ပြီးကြောင်းလေး ပေါ်လာပါမယ်။
ID ထည့်ရမယ့် box လေးအောက်မှာ Register လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ့် Device အတွက် ID လေးပေါ်လာပါပြီ။ ကိုယ့် Google account နဲ့ Browser မှာ စဝင်ကာစနဲ့မတူပါ။ အဲသည်တုန်းက ID ပေါ်နေတာမျိုး မတွေ့ရပါ။
Register လုပ်တဲ့ကိစ္စ OK ပါြ့ပီ။ Done ပါပြီ 😀
Settings -> Install Apps ထဲမှာ Google Play Services ကို ရှာ.. Clear Cache လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Clear Data လုပ်ရင်တော့ နောင် Play Store ပြန်ဖွင့်သုံးချိန် Google account ထပ်ဝင်တာမျိုး လုပ်နေရမှာပေါ့..။
Google Play Store ကို Clear Data လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းကို Reboot လုပ်ပေးပြီး Google Play Store Settings ထဲမှာ ဝင်ကြည့်ရင် Certified ဆိုတာ ပြပါပြီ။ MIUI China rom တွေမှာတော့ Uncertified လို့ပြတာ မရှိတော့ပါ။ Certified လို့လဲ လာတော့ မပေါ်ဘူးခင်ဗျ.. Root ထားရင်တော့ ဘယ်လို ပေါ်မလဲ မကြည့်မိပါဘူး။ TWRP, Root တွေမလုပ်ပဲ rom တင်ထားပြီးစအချိန်လေးမှာပဲ စမ်းလုပ်ထားတာပါ။ Mi A1 လို Stock android rom လိုမှာတော့ Certified ဖြစ်တယ်။ မဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ Status လိုမျိုးပြပါတယ်။
ကိုယ့် Device က Google မှာ Certified auto ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ရင် မိမိကိုယ်တိုင် Manual Register လုပ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ Step ေးလတွေကို လုပ်တတ်လောက်ပါပြီ။ Google pay လိုတွေသုံးပြီး လိုသလို ဝယ်သုံးတာတွေလုပ်နေရင် အဆင်ပြေပြေလေးဖြစ်နေစေဖို့ လုပ်ထားလိုက်သင့်ပါတယ်။
Sai Tun lin
How to fix miui9don’t let buy Google play game’s item.
Do this first. Try to install Google apps by using Google Installer apk from Mi App Store. Most of the people are fine with that.